अाज माघ ०४ गते आइतबार, तपाईंको दिन कस्ताे रहला ? – Purbi sanchar
अाज माघ ०४ गते आइतबार, तपाईंको दिन कस्ताे रहला ?
२०७७ माघ ४, आईतवार ०७:३४
मकर (भो, जा, जी, जु, जे, जो, ख, खी, खु, खे, खो, गा, गी) बचन पूरा गर्न नसक्दा आफन्त तथा इष्टमित्रहरु तपार्ईंदेखि टाढिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ । बोल्दा ध्यान नदिए गलत निर्णयहरु हुनेछन् भने पछि पश्चाताप हुनेछ । पढाइलेखाइमा ध्यान नदिए अरूभन्दा पछि परिनेछ । अरूका लागि समय र श्रम खर्च हुनेहुँदा आफ्नो काम थाति रहनेछन् ।